Sinovac COVID-19 ကာကွယ်ဆေး နောက်ထပ်တစ်သုတ် အင်ဒိုနီးရှားသို့ရောက်ရှိ - Xinhua News Agency
ဂျကာတာ၊ ဇူလိုင် ၁၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း Sinovac မှ ထုတ်လုပ်သည့် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး နောက်ထပ်တစ်သုတ်သည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘန်တန်ပြည်နယ် Soekarno-Hatta နိုင်ငံတကာလေဆိပ်သို့ ပြီးခဲ့သည့်တနင်္လာနေ့က ‌ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Budi Gunadi Sadikin က ဆိုသည်။
အဆိုပါ Sinovac ကာကွယ်ဆေးများအား နောင်တွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံပိုင်ဆေးဝါးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် PT Bio Farmar မှ အဆင်သင့်အသုံးပြုနိုင်သည့် ကာကွယ်ဆေးများအဖြစ်ထုတ်လုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အစိုးရက ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းကို လူအုပ်စုအလိုက် ခုခံအားရရှိခြင်းအဆင့်အထိ‌ရောက်ရှိအောင်ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး သြဂုတ်လတွင် တစ်ရက်လျှင် ကာကွယ်ဆေး အကြိမ်ရေပေါင်း ၂ သန်းထိုးနှံပေးနိုင်ရန် ရည်မှန်းချက်ထားဆောင်ရွက်နေကြောင်းဝန်ကြီးကဆိုသည်။
“ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းအစီအစဉ်အပြင် ကျန်းမာ‌ရေးဆိုင်ရာလိုက်နာရမယ့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီး အစိုးရ က ချမှတ်ထားတဲ့ မူဝါဒများ(လူစုလူဝေးရှောင်ရှားခြင်းစသဖြင့်) တွေကို ဆောင်ရွက်စေပြီး လျှင်မြန်စွာကူးစက်မှုများကို လျှော့ချကာ ကပ်ရောဂါကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းသွားပါမယ်” ဟု ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကဆိုသည်။ (Xinhua)
GLOBALink | New batch of Sinovac COVID-19 vaccines in bulk arrives in Indonesia
JAKARTA, July 12 (Xinhua) — Another batch of COVID-19 vaccines in bulk produced by Chinese pharmaceutical company Sinovac has arrived at Soekarno-Hatta International Airport in Banten province, Indonesia, the country’s Health Minister Budi Gunadi Sadikin said on Monday. The Sinovac vaccines in bulk will later be processed by PT Bio Farma, Indonesia’s state-owned pharmaceutical company, into ready-to-use vaccines.
The Indonesian government aims to accelerate the vaccination process to reach herd immunity and meet the target of two million COVID-19 vaccine injections per day in August, Budi added.
“The vaccination program, in addition to implementing health protocol disciplines and complying with government policies such as PPKM (community activity restrictions), will help to reduce the rate of transmission quickly and to control the pandemic,” said Sadikin.
တရုတ်နိုင်ငံ ဝူကျန့်မြစ်၌ ဂေဟဗေဒ စနစ် တိုးတက်ကောင်းမွန်လျက်ရှိ